Aqoonta iyo Nolosha Wiyisha | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Deegaankeenna January 3, 2016	0 866 Views
Muqdisho (Himilonews) – Nafley aad u weyn oo u xoog badan oo gees ama laba gees wajiga ku leh: waxay leedahay indho yar-yar–araggeedu maficna: dhagaheeda iyo sankuse aad bay wax u dareemi ogyihiin. Waxaa ku gaashaaman harag wax kasta ka qiro weyn oo ka adag. Way daadsataa oo waa dhir xagato: hilibkana macunto. Waxay ku nooshahay Afrikada hodanka ah iyo meelo kale. Midda ku nool Afrika ayaa ka qiro iyo xoog weyn midda Aasiya siiba dalka Hindiya.
Kudhawaad 500,000 oo Wiyil ayaa ku nooleyd adduunka qarnigii 20aad. Hadda tiradaas waxay hoos isku dhintay wax ka badan. Sida ay tilmaamayaan waaxyada duur-joogta, 29,000 oo Wiyil ah ayaa maanta ifka jooga. Ugaarsiga lagu hayo darteed ayaa sababtay inay tiradaas baaxadda leh hoos ugu sii dhacdo.
Wuxuu dheer yahay saddex ilaa afar mitir. Culeyskiisa ugu badan wuxuu garaa 2300 oo kiilogaraam. Dhirirkiisa ugu yar waa 1.5 mitir. Culeyskiisa ugu yarna wuxuu gaaraa 800 kiilogaraam.
Sanad iyo bar kasta, Wiyishu waxay dhali kartaa. Sidkeeda waxaa loo shintiriyaa 15-16 bilood. Badi waxay dhalaan hal: marna way mataaneeyaan. Dhasha bilowgeeda hore ee if-usoo baxa, culeyskeedu wuxuu gaaraa 40 ilaa 64-kilogaram.
Saddex sano kadib ilmaha Wiyisha waxay gaar u sameystaan noloshooda. Wiyishu waxay noolaan kartaa wax ku dhow 45-sano.
Previous: 12 Xaqiiqood oo Kaneecada ku saabsan
Next: WAX KA BARO JEERTA
La kulan – Nin 4,000 Shinbiro ah quudiya maalin kasta.